Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Greece njem njem » Lọ oriri na ọ Resụ ,ụ, ụlọ mmanya na ụlọ ahịa na-emegheghachi na Gris mgbe ọnwa 6 COVID-19 mechiri
Mkpọchi COVID-19 nke abụọ nke Gris, nke malitere na Nọvemba 7, 2020, ji nwayọ nwayọ nwayọ n'oge opupu ihe ubi a
Ngalaba na-eri nri na ebe a na-esi nri Greek amalitegharịrị n'okpuru mmachi tupu mmalite nke oge ndị njem
A na-ekwe ka ụlọ nri na ihe ọ drinkụ drinkụ na-ejere ndị ahịa nọ ọdụ n'èzí ozi
Ndị ahịa kwesịrị ịgba akwụkwọ oge iji zipu ozi ederede na nọmba steeti
Ka ọnwa isii gachara mmechi coronavirus, ụlọ oriri na ọesụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ barsụ reụ na ụlọ mmanya na-emechi emepe Greece izu a.
Mkpọchi COVID-19 nke abụọ nke Gris, nke bidoro na Nọvemba 7, 2020, ji nwayọ nwayọ nwayọ n'oge opupu ihe ubi a, ebe ọnụọgụ nke ikpe coronavirus ọhụrụ agbasiela ike n'oge na-adịbeghị anya yana ịgba ọgwụ mgbochi ndị mmadụ na-aga n'ihu.
Dininglọ oriri na ọ andụ Greekụ Greek na nri na-amaliteghachi n'okpuru mgbochi tupu mmalite nke oge njem, nke emebere na Mee 15.
A na-ekwe ka ụlọ nri na ihe ọ drinkụ drinkụ na-ejere ndị ahịa nọ ọdụ n'èzí ozi, yana ihe dị ka mmadụ isii na tebụl na ebe dị anya n'etiti tebụl. Ndị agha ga-emerịrị ihe mkpuchi ihu na-eche nche ma were ule abụọ COVID-19 kwa izu.
Ndị ahịa kwesịrị ịgba akwụkwọ oge iji zipu ozi ederede na nọmba steeti iji kwado ịpụ apụ ha. Foodlọ nri na ihe ọ drinkụ drinkụ niile ga-emechi n'elekere 11.00 nke abalị maka ịlọta n'abalị.
N'ime ọnwa isii gara aga, ụlọ oriri na ọ Greekụ Greekụ Greek na ụlọ oriri na ọ cafụ cafụ nwere ike ịnye ọrụ na nnyefe. Ọtụtụ ahọrọla imechi.
N'ime afọ gara aga, ngalaba ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ tụfuru ihe karịrị ijeri euro 2.5 ($ 3 ijeri) na ntugharị, dị ka atụmatụ ndị a na-adịbeghị anya site n'aka ndị Hellenic Statistical Authority (ELSTAT).
Ihe ngwugwu nkwado nke steeti Greek ga-eru ijeri euro 15 ijeri a, okpukpu abụọ nke mbido mbụ nke ijeri 7.5. Mkpokọta ọnụ ahịa nke ngwugwu nkwado site na mmalite nke ọrịa a dị 39 ijeri euro, Mịnịsta na-ahụ maka ego Christos Staikouras kwuru ụbọchị ole na ole gara aga.
Usoro ndị a gụnyere enyemaka maka mgbazinye ego nke ụlọ akụ, ịkwụsịtụ ụtụ isi na ịkwụ ụgwọ mkpuchi mkpuchi mmekọrịta mmadụ na enyemaka ego site na ego European Union (EU) iji kpuchie ụgwọ ụlọ na ụgwọ ndị ọzọ.
Ka ụwa na-agba mbọ ịnagide ọrịa a, ọgwụ mgbochi na-aga n'ihu n'ọtụtụ mba na-anabata ọgwụ mgbochi coronavirus ugbua. Ihe dị ka nde ọgwụ 3.1 ka a na-enye na Gris ruo ugbu a.